Frantsa: Ilay akamanay taloha manahirana, Monsieur Ben Ali · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Janoary 2011 16:08 GMT
Nipoitra ihany. Mahatsapa ny fanaovana mody fanina ao anatin'ny fotoana maharitra ataon'ny mpanao politika frantsay sy ny gazety mahazatra, noho ny fifankatiavana (amitié) naharitra ampolony taona maro (teo amin'i Frantsa sy) teo amin'ny fitondrana Zeinabidine Ben Ali ny mpamaham-bolongana frantsay sy ny mpisioka an-tserasera. Efa mampanontany ihany ny farany ny fanginan'ny fitondrana Frantsay sy ny fanaovany kopaka isasahana iarahany amin'ny fitondran'i Ben Ali regime.
Nicolas Sarkozy sy Zinedine Ben Ali nandritra ny fitsidihana ara-panjakana teo amin ny fiantsonan ny voromby ao Tunis, 2008 (pikantsary tamin ny efijery ofisialy)
[Avy amin'ny vohikala FR avokoa ny rohy rehetra ankoatra izay lazaina manokana] Ny takarivan'ny 14 Janoary, rehefa re ny fandosiran'ny filoha voaongana Ben Ali sy ny ankohonany niala an'i Tonizia taorian'ny fihetsiketsehana faobe tao an-drenivohitra, Tunis, sy ny volana nanjakan'ny ra mandriaka noho ny fandravana hetsika, dia namoaka fanambarana milaza ny “fanekeny” ity “tetezamita”-n'ny fiovana ity ny fitondrana Frantsay ary dia nangina indray tahaka ny teti-panorona nataony nandritra ny herinandro vitsivitsy. Kôpy ny Frantsay fa sahiran-kevitra tanteraka ny ao amin'ny Lapam-panjakana ao Elysée. Ny vaovao nipoitra voalohany tao amin'ny Twitter moa dia nanambara fa nigadona any Frantsa ny havan'i Ben Ali.
rosselin#Mickeys #pathetic RT @mathieuge : mialokaloka ao Disneyland ny havan'i Ben Ali sasany
Noheverina hangataka fialokalofana any Frantsa noho izany i Ben Ali. Nambara avy teo fa tena nangataka hialokaloka tany Frantsa tokoa izy, saingy nalefan'ny namany taloha (tany Arabia Saodita) noho ny “savorovoro any amin'ireo Toniziana any ampielezana” mety ateraky ny fanatongavany. Tweet tokana hita ao amin'ny Twitter-n'ny Lapan'i Elysée nandritra ny alin'io fitsoahana io no manamarika ny fahasahiranan-tsaina sy ny fikorontanana ara-diplaomatika misy ao:
elysee: Hamaly ny fangatahan'ny fitondrana toniziana rehetra mikasika ny fananan'i Tonizia any Frantsa i Lafrantsa.
Ny lalan ny voromby nitondra an i Ben Ali: avy amin ny La vie en rose ao amin ny Facebook, bolongana Albab
Louis Calvero ao amin'ny Le post no mandrandrana ny “fitantanana nipatitaka“ tanteraka ny “krizy Toniziana” avy amin'ny fitondrana frantsay:
Fantatra ny fieoboeboan'i Frantsa, mailaka aoka izany hanazava ny Amerikan'i Obama, Eoropan'i Barroso ary ny fiainan'ny tsirairay. Nefa ankehitriny, raha nampiantso ny ambasadera toniziana i Washington ary milaza ny tebitebiny izao tontolo izao dia mangina kosa i Paris.
Ny tena loza dia ity. Raha nihamafy ny fihetsiketsehan'ny Toniziana dia nanohy tamin'ny fanohanana an'i Ben Ali sy ny zava-bitany kosa ny minisitra am-perinasa sy teo aloha frantsay. Namoaka fanambarana mahamenatra tsy ho adinoin'ny Toniziana, sy nanaitra ny Frantsay hanara-maso ny fihetsiky ny fitondrana ny mpiandraikitra ny diplaomasia frantsay ny 11 janoary lasa teo.
Michèle Alliot-Marie, Minisitra Frantsay misahana ny Raharaham-bahiny, Sary Wikimedia
Ao amin'ity lahatsary ity ny minisitra frantsay misahana ny raharaham-bahiny, Michèle Alliot-Marie, no nanambara ampahibemaso tao amin'ny Antenimieram-pirenena fa vonona ny “hanohana ara-teknika” sy ” hizara ny fahaiza-manaon'ny Polisy frantsay amin'ny Polisy Toniziana” i Frantsa.
L'arabe, mpamaham-bolongana Frantsay teratany Toniziana no nanoratra ny C'est la gêne, mitantara azy tsara ny andro manaraka:
Raha fehezina, ny finiavana hanampy mavesatra ny fitondrana Ben Ali dia tahaka ny milaza fa hanampy tosika tsotra izao, amin'ny samy mpifanakaiky, ny mpamono olona eo am-pivelesana ny olona darohany ao amin'ny lalankely iray manatrika ny building.
Nitovatovana nanaraka izany moa ny fanehoam-pahatezerana tamin'ireo hevitra an-jatony voasoratra, tahaka ity iray ity, hita ao amin'ny bolongan'ny mpanentana ao amin'ny radio iray antsoina hoe Jean-Marc Morandini :
Oadray izany tsy fahalalàna mihitsy ny zavamisy any an-toerana, raha tsy hoe angaha fibaribarian'ny tsy fahaizana na inona na inona, na porofon'ny tsy fahalalana menatra.
Nandritra ny “andro manaraka” ny fidarabohan'i Ben Ali dia niha-haingana ny toe-draharaha. Mifampihaika mivantana amin'ny kaonty Twitter an’ny Lapan'ny Elysee sy ny minisiteran'ny raharaham-bahiny izay mangina momba an'i Tonizia ankehitriny ny mpisioka an-tserasera frantsay.
Nitsangana sady niroborobo vetivety ny vondrona Facebook Frantsay iray, Rindrin'ny Henatra Ben Ali, izay natokana ho an'ny mpanao politika sy olo-malaza Frantsay rehetra nanohana an'i Ben Ali, manasa ny mpikambana ao aminy hamoaka porofo (sary, lahatsary, sombinteny). Nisy ny lahatsary ahitana an'i Nicolas Sarkozy nandritra ny kabarim-pitsidihana ara-panjakana tany Tonizia tamin'ny taona 2008 azo jerena, raha nomena ny fizakana mahaolom-pirenena tandrenivohitra Tunis izy tamin'izany fotoana izany:
Indraindray aho mieritreritra fa masiaka loatra amin'i Tonizia ny sasany
Dominique Strauss Kahn, filoha ankehitriny mitantana ny FMI sady mety hirotsaka hofidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena Frantsay amin'ny 2012, no hita mandokandoka ny fandrosoana ara-toe-karena toniziana nandritra ny resadresaka nifanaovany tamin'ny talevizionam-panjakana Toniziana, ao anatin'ity lahatsary navoakan'ny Rue89 indray ity:
Anticolonial.com no namoaka tamina lahatsary YouTube iray ny kabarim-pitokanana nataon'ny Filoha Sarkozy, namoaka ny hoe:
Ho an'ny vahoaka voageja rehetra manerana izao tontolo izao, hitsangana eo anilanareo izahay…
Hazem Berrabah, ao amin'ny kaontiny Facebook, dia namoaka ny lahatsariny namboariny manokana mitondra ny lohateny hoe ” Tsy ho adinoinay mandrakizay fa nanohatra hatramin'ny minitra farany an'i Ben Ali i Frantsa“, izay ahitana ny filoha Sarkozy milaza hoe:
Tsy hanohana izay mpitondra jadona eto amin'izao tontolo izao aho.
Ny bolongana mpananihany Backchich, izay nilaza voalohany ny fangoronan-karena tafahoatra ataon'ny fianakavian'i Ben Ali, no nandahatra ny mpanao politika na debaben'ny haino aman-jery frantsay izay nanohana na niasa ho fiarovana ny fitondran'i Ben Ali ka namoaka ny boky miresaka ny “Namanay Ben Ali.” Mpanohana ny mpamaham-bolongana Toniziana iray hafa hatry ny ela koa i Fabrice Epelboin, tonian'i ReadWriteWeb France izay nahavory manampahaizana Frantsay tamin'ny taratasy mivelatra ho an'ny Minisitry ny Kolontsaina Frantsay, Frédéric Mitterrand, izay vao namaritra tamin'ny fiandohan'ny volana janoary ny fitondrana Toniziana ho “tsy jadona, raha lazaina amin'ny teny tsotra”.
Mitafatafa amin'i Catherine Graciet ankehitriny ny haino aman-jery Frantsay hanangona ny tahirin-kevitra vitsy momba ny fifandraina misy eo amin'i Frantsa sy Tonizia. Mpiara-manoratra ny boky kely miresaka ny momba ny vadin'i Ben Ali manko izy io, The Regent of [Mpitantana an'i ] Carthage, izay mamahavaha tamin'ny 2009 ny fandrobana ny toekarena Toniziana ataon'ny havany [jereo ny sombiny amin'ny teny frantsay ato], izay nohamafisin'ny Wikileaks nalefan'i Ambasadera Amerikana any Tonizia. [lahatsary teny arabo]
Ary ny Daily Motion, misy lahatsary ahitana an'i Ben Ali sy i Sarkozy mandihy sy mifamihina amin'ny feon-kiran'i”Endless love” :
Sarkozy sy Ben Ali ” The Endless Love ! “
nalefan'i unknown003. – Jereo ny lahatsarin'ny hira hafa.
Raha nalaza vetivety ny tenifototra Revolisiona Jasmine ao amin'ny MSM frantsay, ampahatsiarovan'i Olivier ao amin'ny famoahan-kevitra ny mpanao matoandahatsoratra tahaka izao no nataon'i Ben Ali rehefa nandrayny fahefana izy ny 1987. Luc Rosenzweig, ao amin'ny Causeur, dia nanolo-kevitra ny mpanao matoandahatsoratra Frantsay hitony amin'ny fomba fanoratr'izy ireo manaitaitra, “Ceaucescu-ny tora-pasika” (Ben Ali), taorian'ny taona vitsivitsy nanginana, ao amin'ny lahatsorany mitondra ny lohateny hoe “Mahafinaritra izany manenji-dresy izany“.
Mandritra izany kosa dia maro ny mpamaham-bolongana Toniziana monina any Frantsa no mamoaka lahatsoratra mampihetsi-po, sambany manoratra amin'ny tena anarany, tahaka an'i Chaker Nouri, ao amin'ny Lasa ihany ny Ceaucescu an'i Carthage. Lehibe loatra manko ny tahotra haneho hevitra amin'ny tranonkala frantsay noho ny tahotra fandrao mampisy olana amin'ny fianakaviany any Tonizia izany. Nisento sy faly i Chaker fa tsy afa-po:
Tsy feno ny fifaliako. Ny tena manaitra ahy dia ny fahasamihafana misy eo amin'ny Toniziana any an-toerana amin'ny Toniziana any ampielezana. Ny Toniziana any ampielezana faly amin'ny fandosiran'ny mpanao didy jadona nefa ny any an-toerana kosa manahy ny amin'ny rotaka manjaka.
Lavidavitra avy eo kosa, any amin'ny faritra iray nozanahin'ny Frantsay taloha ihany koa, any Afrika Andrefana, ny Ampamhama-bolongana Afrikana iray no milaza ny hetahetany:
Vaovao tsara! azo nofisintsika ho an'ny tanindrazantsika mahantra dia i Kongo Brazzaville izay robain'ny foko Mpilan tahaka ny anaovan'ny foko Ben Ali Trabelsi, ihany koa ny zavatra toy izao. Mazava loatra fa mora ny manonofy ! Hita kosa anefa fa ambony lavitra noho ny vitan'i Sassou sy ny fokony ny vitan'i Ben Ali]
Nawaat.org, vohikalam-pampahalalam-baovao Toniziana natsangan'ny Toniziana nisintaka [ho mpanohitra] tamin'ny 2004 dia nampitombo ho hatramin'ny 12 000 nandritra ny herinandro mahery kely fotsiny ny mpamakiny 4000 ary nitana ny lohalaharana teo anatrehan'ny mpamaham-bolongana Toniziana sy Frantsay ho mpamoaka vaovao farany sady voamarina no mifanaraka amin'ny zavamisy any Tonizia voasoratra amin'ny teny Frantsay, Arabo ary Anglisy.